Umgca we-Biography of William Morris Davis
UYise waseMelika weJografi
UWilliam Morris Davis uvame ukubizwa ngokuba ngu "uyise we-geografia yaseMelika" emsebenzini wakhe ekungabinceda nje ukuseka i-geography njengomyalelo wokufundisa kodwa nokuqhubela phambili kwakhe kwimihlaba kunye nokuphuhliswa kwe-geomorphology.
UDavis wazalelwa eFiladelphia ngo-1850. Xa eneminyaka eyi-19 ubudala, wathola idigri ye-bachelor degree esuka kwiYunivesithi yaseHarvard kunye nomnye wonyaka wafumana i-master degree yezobunjineli.
UDavis wabe esethatha iminyaka emithathu esebenza kwi-Observatory yezemidlalo yaseArgentina kwaye wabuyela eHarvard ukuba afunde i-geology kunye ne-geography.
Ngomnyaka we-1878, uDavis wamiselwa njengomfundisi kummandla weHarvard kwaye ngo-1885 waba nguprofesa opheleleyo. UDavis waqhubeka efundisa eHarvard de kube ngumhlala-phantsi wakhe ngo-1912. Emva kokuthatha umhlalaphantsi wakhe, wahlala kwiindawo ezininzi zee-scholar zokuvakashela kwiiyunivesithi ngaphesheya kwe-United States. UDavis wasweleka ePasadena, eCalifornia ngowe-1934.
UWilliam Morris Davis wayevuyiswa kakhulu ngokuqeqeshwa kwejografi; Wazama kanzima ukwandisa ukuqaphela kwayo. Ngama-1890, i-Davis yayilungu elichaphazelayo kwikomiti eyancedayo ekumiseni imigangatho yemeko kwiikolo zikarhulumente. UDavis kunye nekomiti beva ukuba i-geography kufuneka iphathwe njengesayensi jikelele kwizikolo eziprayimari neziziisekondari kwaye ezi ngcamango zamkelwe. Ngelishwa, emva kweminyaka elishumi ye-geography "entsha", yabuyela ekuhlaleni ulwazi lwamagama eendawo kwaye ekugqibeleni yanyamalala kwizibilini zentlalo yoluntu.
UDavis naye wancedisa ukwakha i-geography kwizinga leyunivesithi. Ukongezelela ekuqeqeshweni kwamanye ama-geographer aphezulu e-America yekhulu le-20 (njengoMark Jefferson, uIsaya Bowman, no-Ellsworth Huntington), uDavis uncedise ukufumana uMbutho we-American Geographers (AAG). Ukuqaphela isidingo sombutho wezemfundo owaqulunqwa ngabafundi abaqeqeshwe kwiijografi, uDavis wadibana namanye amajelo geographer waza wenza i-AAG ngo-1904.
UDavis wayekhonza njengomongameli wokuqala we-AAG ngo-1904 kwaye waveliswa kwakhona ngo-1905, kwaye ekugqibeleni wakhonza kwikota yesithathu ngo-1909. Nangona uDavis wayenempembelelo enkulu ekuphuhliseni i-geografi ngokubanzi, mhlawumbi uyaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe kwi-geomorphology.
I-Geomorphology yinto yokufunda komhlaba. UWilliam Morris Davis wasungula eli nqanaba le-geography. Nangona ngexesha lakhe ingcamango yendabuko yokuphuhliswa kwemihlaba yasemhlabeni yayingumkhukula omkhulu weBhayibhile, uDavis nabanye baqala ukukholelwa ukuba ezinye izinto zazijongene nokubunjwa komhlaba.
UDavis wavelisa imbono yokudala umhlaba kunye nokukhukhula komhlaba, awawuthiwa "umjikelo wendawo." Le ngqungquthela iyaziwa ngokubanzi ngokuthi "umjikelezo wokukhukhula," okanye ngokufanelekileyo, "umjikelezo we-geomorphic." Ingcamango yakhe ichaze ukuba iintaba kunye nemimiselo yomhlaba yenziwe, ikhule, kwaye idala.
Wachaza ukuba umjikelezo uqala ngokuphakanyiswa kweentaba. Imifula kunye nemifudlana iqala ukudala iinqaba ezi-V phakathi kweentaba (isigaba esibizwa ngokuthi "ulutsha"). Ngethuba lesigaba sokuqala, ukukhululeka kunene kakhulu kwaye kuninzi kakhulu. Ngokuhamba kwexesha, imilambo iyakwazi ukudweba iiflaba ezibanzi ("ukukhula") kwaye ke uqale ukuhamba, uhambe nje kuphela kwiinduli eziguqayo ("ubudala").
Ekugqibeleni, zonke ezishiywe yi-flat, level level kwindawo ephantsi kakhulu ebizwa ngokuba yi "level base.") Le ntaba yayibizwa ngokuba nguDavis "peneplain," oku kuthetha ukuba "phantse" indawo epheleleyo). Emva koko, "ukuvuselelwa" kwenzeka kwaye kukho enye ukuphakanyiswa kweentaba kwaye umjikelezo uyaqhubeka.
Nangona inkolelo kaDavis isingqinisiswanga ngokupheleleyo, yayinguguquguqukiyo kwaye ibalaseleyo ngexesha layo kwaye yanceda ekuphuculeni i-geografi ngokomzimba kwaye yenze intsimi ye-geomorphology. Ihlabathi lenene alisoloko lihlelekile njengoko imijikelezo kaDavis kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuguguleka kwenzakala ngexesha lokuphakanyiswa. Nangona kunjalo, isigidimi sikaDavis sasixhunyaniswe kakuhle kwezinye izazinzulu ngokusebenzisa imidwebo ephezulu kunye nemifanekiso eyayifakwe kwiincwadi zikaDavis.
Kukho konke, uDavis washicilela imisebenzi engaphezu kwama-500 nangona engazange athathe iFP.
Ngokuqinisekileyo uDavis wayengomnye wabafundi beyona geyibrari yezona zifundo. Akayena kuphela uxanduva loko awenzayo ngethuba lokuphila kwakhe, kodwa nangenxa yomsebenzi obalaseleyo owenziwa kwii- geography ngabafundi bakhe.
Ixesha lexesha leZenzo kwiNkcazo yeZivolution
I-Jig Head Worm
Akukho ziflephu ezimbini ze-Snowflakes eziqhelekileyo - Ewe Okwenene okanye Ebuxoki